जनता बैंकले खोलिदिने भयो सबै नेपालीको बचत खाता - जनता बैंकले खोलिदिने भयो सबै नेपालीको बचत खाता
२०७6, २ बैशाख, 11:17:47 AM
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले विभिन्न विशेषता भएको ‘सबै नेपालीको खाता’ संचालनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारले नयाँ वर्ष २०७६ वैशाख १ गतेदेखि सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान ल्याएको थियो । बैंकले सरकारको काममा सहयोग पुर्याउने हेतुले विभिन्न विशेषतासहितको बैंक खाता संचालनमा ल्याएको छ ।
शुन्य मौज्दातमा खाता खोल्न सकिने, खाता खोल्दा रु. १००/०० बैंकको तर्फबाट जम्मा गरिदिने, ६.५ % वार्षिक व्याजदर, दैनिक मौज्दातमा त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी, रु. २ लाख सम्मको ABBS सेवा निःशुल्क, झंझट रहित सरल रुपमा खाता खोल्न सकिनेलगायत अरु थप विशेषताहरु रहेका छन् । देश भरी छरिएर रहेका बैंकको १२८ ओटै शाखाबाट यस प्रकारको खाता खोल्न सकिने छ ।
जनता बैंकका ग्राहकलाई मेडिसिटि अस्पतालमा विशेष छुट